पोखरीमा खेलिरहेका माछालाई कसले हालिदियो बी’ष ? – live 60media
बास्तवमा हामी नेपालीहरुको सोच यो सँसारमै सबैकाे भन्दा नीच र नकरात्मक नै छ भन्ने उदाहरण हाे यो । नेपालका नेताहरूलाइ गाली गरेर नथाक्ने हामी नेपाली नै सबै भन्दा खराव छाै जस्तो लाग्छ । खै नेपालीहरूकाे जन्मजात रगतमै यस्तो नकरात्मक सोच मात्रै किन आउँछ ।
कसैले केहि राम्रो काम गर्यो भने कसरी उस्काे बिगार्ने रिस गर्ने, खुट्टा तान्ने, भयंकर महत्वाकांक्षी सोच, मै लाउ मै खाउ, नकारात्मक को भण्डार आदि कहाँबाट कसरी आउँछ? दशैंमा माछा बेचेर करिव एक लाख नाफा कमाउने उनको लक्ष्य थियो ।
‘माछा नमरेको भए दशैमा बेचेर नाफा मात्र एक लाख हुन्थ्यो तर कसले पोखरीमा बिष हालेर सखाप बनाइदियो,’ श्रेष्ठले भने । उनले टोल सुधार समिति, वडा कार्यालय र घ्याल्चोक प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएका छन् । प्रहरीले घटनाको छानबिन भइरहेको बताएको छ । २८ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर श्रेष्ठले आप, लिची, एभोगाडो, केरालगायतका खेती गर्दै आएका छन् ।
गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ दर्बुङ गाउँका किसान राजेन्द्र श्रेष्ठको पोखरीमा कसैले विष हालेपछि म’रेका माछा।
← नफ्याँक्नुस् चौलानी, यस्ता छन् अद्भुत फाइदा
50 लाख लिएर अर्कैसंग श्रीमती फ’रार, साउदीबाटै श्रीमान रुदै मिडियामा, बच्चाको बिजोक, मनै छुने भित्री कहानी (भिडियो सहित) →